Noocyada farsamooyinka iyo waxa loogu talagalay
Farsamadu waa qaybo ama aalado noo oggolaanaya inaanu qabanno shaqo, taas oo ah, gudbinta ama beddelidda dhaqdhaqaaqa.
Waxay umuuqataa in da'da elektaroniga aad tagtay asalka, laakiin muhiimadeeda wali waa muhiim, maadaama abuuritaan kasta oo ay tahay in loo keeno diyaaradda jireed uu u baahan doono farsamooyin, si kasta oo ay aasaasi u yihiin.
Farsamooyinka ayaa la darsay ilaa wakhtiyadii hore waxayna sii ahaanayaan oo ay noqon doonaan mid ka mid ah qaybaha lagama maarmaanka u ah wejigaaga sida hal abuure.
Injineernimada, mechatronics, robotics waxay u baahan yihiin farsamooyin. Immisa ka badan ayaad taqaanaa oo fahmeysaa sida sharciyada jireed ay u shaqeeyaan, waxa loogu talagalay iyo sida ay u dhaqmaan, fursado badan oo kala duwan iyo habab cusub oo ku habboon mashruucaaga ayaa awood u yeelan doona inaad abuurto.
Kabaalku waa farsamo, kaameero, fur Archimedean. Waxaan galaynaa adduun aad uxiiso badan. Kaliya waxtar uma leh hal-abuurnimada, sameeyayaasha, farshaxan-yahannada, iyo guildooyin badan oo kale oo hal abuur leh ayaa u baahan inay wax ka ogaadaan iyaga xitaa haddii aysan weli xaqiiqsan.
Noocyada, kala-soocidda iyo tusaalooyinka qaababka
Daloolin godad Square
Eduardo Mier ayaa iiga digay fiidiyow aad u xiiso badan oo uu doonayay inuu ku tuso. Waa tabobar ... Akhri akhriska
Farsamooyin dhowr ah oo caadi ah
Iyada oo loo marayo xiriiriyaha UJI (Universitat Jaume I) Waa hagaag waxaan arki karnaa qaar ka mid ah animations-ka farsamooyinka aan tixgelinno ... Akhri akhriska
Waxa ugu horeeya ee loo mahad celiyo dadka twitter taasi waxay iga caawisay tarjumida cinwaanka Trammel oo ah Archimedes, taas oo aakhirkii ku hadhay sidii Archimedes Compass. Waxaan tixgelinnay «Archimedean trammel» iyo qaab kale «Archimedean Lattice».
Mahad badan @February 1, @sophocles, @ V4nhel iyo kan tarjamada helay @ScienceKanija
Marka aan aragno waxa aan sameyn karno
Farsamooyinka Jansen iyo Hal-abuurka
Waxaan ku jiraa Joometri firfircoon oo leh fiidiyoow farsamooyinka Jansen.
Oo adduun cusub ayaa u furmaya sahamin. Ilaah cusub ayaa u dhashay cibaadada :)
Sida loo sameeyo shaarib farsamo
Waxaan helnay tan weyn shaarib farsamo, taas oo ina tusaysa inaysan fiicnayn in la helo farsamo aad u horumarsan ama ilo badan, si loo helo natiijooyin la yaab leh.
Waxaan ubaahanahay wax badan oo male ah :)
Sidee loo sameeyaa il-biyood-guryeedka guriga lagu sameeyo
Waan aragnay Clepsydras, ka Eolipilla ama Aeolus ee Heron, laakiin wali maanaan arkin Heron's Fountain oo ah mashiin hidde ah oo uu abuuray Heron of Alexandria (Cilmiga fiisikiska qarnigii XNUMXaad, xisaabiye iyo injineer) Nooc waligiis ah oo ka mid ah Dhaqdhaqaaqa dareeraha.
Nooca ugu da'da weyn, ee Heron, wuxuu ahaa sidan soo socota.
Hawlgalku waa mid aad u fudud.
Biyaha ayaa ka soo dhaca A ilaa C (hawo hawo leh iyo hawo la'aan) waxayna ku riixdaa hawada C dhanka B (oo biyo ka buuxaan), taas oo biyaha u riixda dhanka A.
Hagaag sawirka waxaan haynaa taxane taxane ah oo waxtar noo leh si aan u bilowno howsheena, in kastoo sida aad arki doonto wax badan lagu qaban karo guriga.
Sida sawirka ka muuqata. Markii hore waanu xidhnay saddexda waab oo waxaan ku darnaa biyo A. Waxaan fureynaa V2 taangiga Bna waa la buuxinayaa furitaanka V3 wuxuu keenayaa cadaadiska cimilada. Waxaan xirnaa labada waadi oo waxaan u fureynaa V1 isha ay shaqadu ka bilaabaneyso.
Farsamooyinka iyo waraaqaha la jeexjeexay
Waxaan ku qoray ilaa 500 oo maqaal magaalada Ikkaro. Waxaan kuu xaqiijin karaa inaan ku arkay waxyaabo yaab leh, kakanaanta, ... Akhri akhriska
Mashiinka ku darista binary
Si kadis ah ayaan ula kulmay fiidyowyo qaar oo kusaabsan a Mashiinka marmar ku shubaya o Mashiinka ku darista binary leh marmar
Waan sharxayaa sida ay u shaqeyso, in kastoo ay aad ugu wanaagsan tahay labada fiidiyow.
Matoor-dhaliyaha Template si loo dhiso geerka
Akhrinta Microsiervos, waxaan arkay inay ka hadlayaan codsi websaydh ah oo aan ku abuuri karno sheybaarada dhismaha geerka ama ... Akhri akhriska